ရှိတယျလို့တောငျ မထငျရတဲ့ လုပျခလစာကောငျးမှနျသညျ့ အလုပျအကိုငျ (၁၂) မြိုး။ – SoShwe
Home/Other/ရှိတယျလို့တောငျ မထငျရတဲ့ လုပျခလစာကောငျးမှနျသညျ့ အလုပျအကိုငျ (၁၂) မြိုး။
ရှိတယျလို့တောငျ မထငျရတဲ့ လုပျခလစာကောငျးမှနျသညျ့ အလုပျအကိုငျ (၁၂) မြိုး။
admin January 25, 2022	Other Leaveacomment
ဘယျလို အသကျမှေးဝမျးကြောငျးအလုပျမြားက လစာမွငျ့မားသညျ့ အလုပျမြားဟု ထငျပါသလဲ ? ? ? ယခုပွောပွသှားမညျ့ အလုပျအကိုငျမြားထဲမှာလညျး သူငယျခငျြးတို့ လကျရှိလုပျကိုငျနတေဲ့ အလုပျအကိုငျမြားလညျး ပါဝငျနပေါသလား ? ? ? ဒါပမေယျ့ တဈခါတဈရံမှာတော့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ လုပျငနျးခှငျအတှငျး စိတျကနြေပျမှုရရှိစရေနျအတှကျ နညျးပါးသညျ့ လုပျခလစာကို လကျသငျ့ခံနိုငျရနျလညျး လိုအပျပါသေးတယျ။ အခုဆကျလကျဖျောပွပေးမှာကတော့ ကမ်ဘာတဈဝှမျး ရှိတယျလို့တောငျ မထငျမှတျထားတဲ့ လုပျခလစာကောငျးမှနျတဲ့ အလုပျအကိုငျတှကေို Soshwe စာဖတျပရိသတျတှအေတှကျ ဖျောပွပေးလိုကျရပါတယျ။
၁၂။ Crossword Constructor
သငျ့အနနေဲ့ ရှုပျထှေးသညျ့ Puzzle ဂိမျးမြားကို အနိုငျကစားပွီးနောကျ ပိုမိုကောငျးမှနျသညျ့ Puzzle မြားကို ဖနျတီးရနျ စဉျးစားခဲ့ဖူးပါသလား။ ယခုကဲ့သို့ Puzzle ဂိမျးမြားကို ဖနျတီးရေးဆှဲပွီး Puzzle ဂိမျးတဈခုလြှငျ ဒျေါလာ (၁,၀၀၀) နဲ့ အထကျဝငျငှရေရှိနိုငျခွငျးကွောငျ့ အကြိုးအမွတျမြားပွားသညျ့ လုပျငနျးတဈခုဖွဈပမေယျ့ အဆိုပါ Puzzle မြားကို ရောငျးခနြိုငျရနျအတှကျ သငျဖနျတီးသညျ့ Puzzle မြားအနဖွေငျ့ အရညျအသှေးမွငျ့မားရနျလညျး လိုအပျပါတယျ။
၁၁။ Food Stylist
တဈနှဈလြှငျ ဝငျငှေ ဒျေါလာ (၄၃,၀၀၀) နဲ့ အထကျရရှိနိုငျသညျ့ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးတဈခုဖွဈပွီး အစားအသောကျနဲ့ ပတျသကျသညျ့ ဓာတျပုံမြားရိုကျကူးခွငျးတို့၌လညျး တီထှငျဆနျးသဈသညျ့ အိုငျဒီယာမြားရှိနရေနျ လိုအပျပါတယျ။ သငျ့အနနေဲ့ အစားအသောကျမဂ်ဂဇငျးမြား (သို့မဟုတျ) အစားအသောကျစကျရုံမြားရဲ့ ပစ်စညျးထုပျပိုးမှု၊ စြေးကှကျထိုးဖောကျခွငျးနဲ့ ပတျသကျသညျ့ နရောမြား၌လညျး အလုပျအကိုငျရှာဖှနေိုငျပါတယျ။
၁၀။ A Stunt Person
ရုပျရှငျဇာတျလမျးမြားအတှငျး၌ ပါဝငျသညျ့ စတနျ့ပွကှကျမြားတှငျ ဘေးအန်တရာယျကငျးရှငျးရေးသညျ စတနျ့ပွမညျ့ မငျးသားအပျေါ၌ မူတညျလကျြရှိပွီး စတနျ့မငျးသားတဈယောကျရဲ့ တဈနှဈပမျြးမြှလစာသညျ ဒျေါလာ (၇) သောငျးလညျး ဖွဈပါတယျ။
၉။ Disney Character
သငျ့အနနေဲ့ Disney ဇာတျကောငျမြားကို ကွိုကျနှဈသကျသညျဆိုပါက သူတို့ရဲ့ အပနျးဖွကေစားကှငျးမြား၌ သငျ့အတှကျ အလုပျအကိုငျတဈနရောရှာဖှနေိုငျပါတယျ။ အလုပျစဝငျသညျ့ ကာလ၌ တဈနှဈလုပျခ ဒျေါလာ (၂၇,၀၀၀) သာရရှိနိုငျသညျဆိုပမေယျ့ လိုအပျသညျ့အရညျအခငျြးမြားနဲ့ အတှအေ့ကွုံမရှိသူတဈယောကျအတှကျ အဆိုပါပမာဏမှာ မနညျးလှနျးသညျ့ လုပျခလစာပမာဏလညျး ဖွဈပါတယျ။
၈။ Ice Cream Taster
သငျ့အနနေဲ့ ရခေဲမုနျ့မြားကို မွညျးစမျးရငျးဖွငျ့ လစာရနိုငျကွောငျး စဉျးစားခဲ့ဖူးပါသလား၊။ အဆိုပါ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးကို လူအနညျးစုသာ လုပျကိုငျနိုငျကွပွီး တဈနှဈလုပျခ ဒျေါလာ (၁) သိနျးနဲ့အထကျတှငျ ရှိကွောငျးလညျး သိရှိရပါတယျ။ Ice Cream Taster တဈယောကျအနဖွေငျ့ အရောငျ၊ အရသာ၊ အရောအနှောတို့နဲ့ ပတျသကျ၍လညျး အရသာအသဈ၊ ထုတျကုနျအသဈမြားရရှိရနျအတှကျလညျး တာဝနျယူထားရပါတယျ။
၇။ Video Game Player
လူတိုငျးကွိုကျနှဈသကျကွမညျ့ အလုပျအကိုငျတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။ နောကျဆုံးထှကျဂိမျးမြားကို စမျးသပျကစားပွီး ခကျခဲမှု Rating သတျမှတျပေးရနျ လိုအပျကာ လခအနဖွေငျ့ ဒျေါလာ (၅) သောငျးအထိရရှိနိုငျမညျလညျး ဖွဈပါတယျ။ ကောငျးမှနျသညျ့ လစာရရှိမညျဖွဈသညျ့အပွငျ ဂိမျးကုမ်ပဏီမြားမှ တီထှငျသညျ့ ဂိမျးမြားရဲ့ ကျောပီခှမြေားကိုလညျး စမျးသပျကစားပေးရနျအတှကျ ရရှိနိုငျပါတယျ။
၆။ Voice Over Artist
သငျ့အနဖွေငျ့ ကွညျလငျပွတျသားပွီး သာယာနာပြျောဖှယျကောငျးတဲ့ အသံကို ပိုငျဆိုငျထားမညျဆိုပါက ထိပျတနျးအလုပျအကိုငျကောငျးတဈခုကို ရရှိနိုငျမညျဖွဈပါတယျ။ အဓိကအားဖွငျ့ Animation ဇာတျကောငျမြားရဲ့ အသံပိုငျးကို သရုပျဆောငျပေးရမညျဖွဈပွီး ကွညောခကျြမြား၊ ရဒေီယိုနဲ့ Audio စာအုပျမြားကို အသံသှငျးမှတျတမျးတငျရခွငျးမြားကို လုပျဆောငျပေးရမညျဖွဈပါတယျ။ အတှအေ့ကွုံအပျေါမူတညျ၍ တဈနာရီလြှငျ ဒျေါလာ (၂၀) မှ ဒျေါလာ (၂၀၀) အထိရရှိနိုငျပါတယျ။
၅။ Blimp Pilot
အဆိုပါ Blimp မြားကို မောငျးနှငျသညျ့ Pilot မြားအနဖွေငျ့ အတှအေ့ကွုံအပျေါမူတညျ၍ တဈနှဈလြှငျ ဒျေါလာ (၂၄,၀၀၀) မှ ဒျေါလာ (၇၀,၀၀၀) အထိရရှိနိုငျမညျလညျး ဖွဈပါတယျ။ Blimp မြားကို မောငျးနှငျရနျအတှကျ အဆိုပါ Blimp နဲ့ ပတျသကျသညျ့ Pilot လိုငျစငျလိုအပျပွီး လိုငျစငျနဲ့ ပတျသကျ၍လညျး စညျးကမျးတငျးကွပျမှုမြားရှိပါတယျ။
၄။ Private Island Caretaker
အပူပိုငျးဒသေရှိ ကြှနျးတဈကြှနျးသို့ (၆) လခနျ့ သှားရောကျနထေိုငျပွီး ယခုကဲ့သို့ နထေိုငျရခွငျးအတှကျ ဝငျငှရေရှိမညျဟု စိတျကူးယဉျကွညျ့ဖူးပါသလား။ အဆိုပါအလုပျသညျ Private Island Caretaker မြားရဲ့ အလုပျတာဝနျပငျဖွဈပါတယျ။ ခရီးသှားလုပျငနျးမြားဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျ အဆိုပါ တာဝနျမြားသညျ တဖွညျးဖွညျး အရေးပါလာခဲ့ပွီး လုပျခအားဖွငျ့ ဒျေါလာ (၁၅၀,၀၀၀) အထိ ရရှိနိုငျပါတယျ။
၃။ Ethical Hacker
Hacking လုပျခွငျးက သငျ့ရဲ့ ဘဝတဈခုသဖှယျဖွဈနမေညျဆိုပါက တဈနှဈလုပျခ ဒျေါလာ (၁၃၀,၀၀၀) အထိရရှိနိုငျသညျ့ အဆိုပါ လုပျငနျးသညျ သငျ့အတှကျ ကွီးမားသညျ့ အခှငျ့အရေးတဈခုပငျဖွဈပါတယျ။ တရားဝငျ Hacking လုပျငနျးတဈခုအဖွဈ လူသိမြားသညျ့ အဆိုပါ လုပျငနျးကို ကုမ်ပဏီမြားက သူတို့ရဲ့ အားနညျးခကျြမြားကို ပွနျလညျသိရှိစရေနျ အလို့ငှာ ယခုကဲ့သို့ Hacker မြားကို အသုံးပွုပွီး ကုမ်ပဏီရဲ့စနဈမြားကို ပွနျလညျ Hack စခွေငျးလညျး ဖွဈပါတယျ။
၂။ Toy Designer
အရုပျဒီဇိုငျနာဆိုသညျမှာ တီထှငျခဲ့ပွီးသား အရုပျမြားရဲ့ ဒီဇိုငျးအရညျအသှေးမြား တိုးတကျစရေနျ ဆောငျရှကျရသလို ကုနျပစ်စညျးအသဈမြားကိုလညျး ကလေးငယျမြားနဲ့ မိဘမြားအတှကျ တီထှငျဖနျတီးပေးရပါတယျ။ တဈနှဈလုပျခ ဒျေါလာ (၄) သောငျးဝနျးကငျြရရှိပွီး မိခငျမြားရဲ့ စိတျနှလုံးကို လှမျးမိုးနိုငျခွငျး၊ ရိုကျခတျမှုအားကောငျးသညျ့ အရုပျမြားအား ထုတျလုပျနိုငျခွငျးမြားကို စှမျးဆောငျနိုငျမညျဆိုပါက ဒျေါလာ (၁) သိနျးနဲ့အထကျပမာဏပငျ ရရှိနိုငျမညျဖွဈပါတယျ။
၁။ Fortune Cookie Slogan Writers
ကံကွမ်မာနဲ့ ပတျသကျသညျ့ ဆောငျပုဒျမြားရေးသားရသညျ့ အဆိုပါ အလုပျသညျ လစာအားဖွငျ့ ဒျေါလာ (၄) သောငျးမှ (၆) သောငျးအထိ ရရှိနိုငျပမေယျ့ နှဈသကျဖှယျရာကောငျးသညျ့ အလုပျတဈခုမဟုတျကွောငျးလညျး ဆိုကွပါတယျ။
ရှိတယ်လို့တောင် မထင်ရတဲ့ လုပ်ခလစာကောင်းမွန်သည့် အလုပ်အကိုင် (၁၂) မျိုး။
ဘယ်လို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်များက လစာမြင့်မားသည့် အလုပ်များဟု ထင်ပါသလဲ ? ? ? ယခုပြောပြသွားမည့် အလုပ်အကိုင်များထဲမှာလည်း သူငယ်ချင်းတို့ လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်အကိုင်များလည်း ပါဝင်နေပါသလား ? ? ? ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစေရန်အတွက် နည်းပါးသည့် လုပ်ခလစာကို လက်သင့်ခံနိုင်ရန်လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ အခုဆက်လက်ဖော်ပြပေးမှာကတော့ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရှိတယ်လို့တောင် မထင်မှတ်ထားတဲ့ လုပ်ခလစာကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်အကိုင်တွေကို Soshwe စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ရှုပ်ထွေးသည့် Puzzle ဂိမ်းများကို အနိုင်ကစားပြီးနောက် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် Puzzle များကို ဖန်တီးရန် စဉ်းစားခဲ့ဖူးပါသလား။ ယခုကဲ့သို့ Puzzle ဂိမ်းများကို ဖန်တီးရေးဆွဲပြီး Puzzle ဂိမ်းတစ်ခုလျှင် ဒေါ်လာ (၁,၀၀၀) နဲ့ အထက်ဝင်ငွေရရှိနိုင်ခြင်းကြောင့် အကျိုးအမြတ်များပြားသည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် အဆိုပါ Puzzle များကို ရောင်းချနိုင်ရန်အတွက် သင်ဖန်တီးသည့် Puzzle များအနေဖြင့် အရည်အသွေးမြင့်မားရန်လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
တစ်နှစ်လျှင် ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ (၄၃,၀၀၀) နဲ့ အထက်ရရှိနိုင်သည့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အစားအသောက်နဲ့ ပတ်သက်သည့် ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးခြင်းတို့၌လည်း တီထွင်ဆန်းသစ်သည့် အိုင်ဒီယာများရှိနေရန် လိုအပ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အစားအသောက်မဂ္ဂဇင်းများ (သို့မဟုတ်) အစားအသောက်စက်ရုံများရဲ့ ပစ္စည်းထုပ်ပိုးမှု၊ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်သည့် နေရာများ၌လည်း အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများအတွင်း၌ ပါဝင်သည့် စတန့်ပြကွက်များတွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသည် စတန့်ပြမည့် မင်းသားအပေါ်၌ မူတည်လျက်ရှိပြီး စတန့်မင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်နှစ်ပျမ်းမျှလစာသည် ဒေါ်လာ (၇) သောင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ Disney ဇာတ်ကောင်များကို ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဆိုပါက သူတို့ရဲ့ အပန်းဖြေကစားကွင်းများ၌ သင့်အတွက် အလုပ်အကိုင်တစ်နေရာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်စဝင်သည့် ကာလ၌ တစ်နှစ်လုပ်ခ ဒေါ်လာ (၂၇,၀၀၀) သာရရှိနိုင်သည်ဆိုပေမယ့် လိုအပ်သည့်အရည်အချင်းများနဲ့ အတွေ့အကြုံမရှိသူတစ်ယောက်အတွက် အဆိုပါပမာဏမှာ မနည်းလွန်းသည့် လုပ်ခလစာပမာဏလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်အနေနဲ့ ရေခဲမုန့်များကို မြည်းစမ်းရင်းဖြင့် လစာရနိုင်ကြောင်း စဉ်းစားခဲ့ဖူးပါသလား၊။ အဆိုပါ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကို လူအနည်းစုသာ လုပ်ကိုင်နိုင်ကြပြီး တစ်နှစ်လုပ်ခ ဒေါ်လာ (၁) သိန်းနဲ့အထက်တွင် ရှိကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။ Ice Cream Taster တစ်ယောက်အနေဖြင့် အရောင်၊ အရသာ၊ အရောအနှောတို့နဲ့ ပတ်သက်၍လည်း အရသာအသစ်၊ ထုတ်ကုန်အသစ်များရရှိရန်အတွက်လည်း တာဝန်ယူထားရပါတယ်။
လူတိုင်းကြိုက်နှစ်သက်ကြမည့် အလုပ်အကိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက်ဂိမ်းများကို စမ်းသပ်ကစားပြီး ခက်ခဲမှု Rating သတ်မှတ်ပေးရန် လိုအပ်ကာ လခအနေဖြင့် ဒေါ်လာ (၅) သောင်းအထိရရှိနိုင်မည်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်သည့် လစာရရှိမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ဂိမ်းကုမ္ပဏီများမှ တီထွင်သည့် ဂိမ်းများရဲ့ ကော်ပီခွေများကိုလည်း စမ်းသပ်ကစားပေးရန်အတွက် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
သင့်အနေဖြင့် ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး သာယာနာပျော်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ အသံကို ပိုင်ဆိုင်ထားမည်ဆိုပါက ထိပ်တန်းအလုပ်အကိုင်ကောင်းတစ်ခုကို ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် Animation ဇာတ်ကောင်များရဲ့ အသံပိုင်းကို သရုပ်ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ကြေညာချက်များ၊ ရေဒီယိုနဲ့ Audio စာအုပ်များကို အသံသွင်းမှတ်တမ်းတင်ရခြင်းများကို လုပ်ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ အတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ တစ်နာရီလျှင် ဒေါ်လာ (၂၀) မှ ဒေါ်လာ (၂၀၀) အထိရရှိနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Blimp များကို မောင်းနှင်သည့် Pilot များအနေဖြင့် အတွေ့အကြုံအပေါ်မူတည်၍ တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ (၂၄,၀၀၀) မှ ဒေါ်လာ (၇၀,၀၀၀) အထိ ရရှိနိုင်မည်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Blimp များကို မောင်းနှင်ရန်အတွက် အဆိုပါ Blimp နဲ့ ပတ်သက်သည့် Pilot လိုင်စင်လိုအပ်ပြီး လိုင်စင်နဲ့ ပတ်သက်၍လည်း စည်းကမ်းတင်းကြပ်မှုများရှိပါတယ်။
အပူပိုင်းဒေသရှိ ကျွန်းတစ်ကျွန်းသို့ (၆) လခန့် သွားရောက်နေထိုင်ပြီး ယခုကဲ့သို့ နေထိုင်ရခြင်းအတွက် ဝင်ငွေရရှိမည်ဟု စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ဖူးပါသလား။ အဆိုပါအလုပ်သည် Private Island Caretaker များရဲ့ အလုပ်တာဝန်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဆိုပါ တာဝန်များသည် တဖြည်းဖြည်း အရေးပါလာခဲ့ပြီး လုပ်ခအားဖြင့် ဒေါ်လာ (၁၅၀,၀၀၀) အထိ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Hacking လုပ်ခြင်းက သင့်ရဲ့ ဘဝတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေမည်ဆိုပါက တစ်နှစ်လုပ်ခ ဒေါ်လာ (၁၃၀,၀၀၀) အထိရရှိနိုင်သည့် အဆိုပါ လုပ်ငန်းသည် သင့်အတွက် ကြီးမားသည့် အခွင့်အရေးတစ်ခုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ တရားဝင် Hacking လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် လူသိများသည့် အဆိုပါ လုပ်ငန်းကို ကုမ္ပဏီများက သူတို့ရဲ့ အားနည်းချက်များကို ပြန်လည်သိရှိစေရန် အလို့ငှာ ယခုကဲ့သို့ Hacker များကို အသုံးပြုပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့စနစ်များကို ပြန်လည် Hack စေခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အရုပ်ဒီဇိုင်နာဆိုသည်မှာ တီထွင်ခဲ့ပြီးသား အရုပ်များရဲ့ ဒီဇိုင်းအရည်အသွေးများ တိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ရသလို ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များကိုလည်း ကလေးငယ်များနဲ့ မိဘများအတွက် တီထွင်ဖန်တီးပေးရပါတယ်။ တစ်နှစ်လုပ်ခ ဒေါ်လာ (၄) သောင်းဝန်းကျင်ရရှိပြီး မိခင်များရဲ့ စိတ်နှလုံးကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခြင်း၊ ရိုက်ခတ်မှုအားကောင်းသည့် အရုပ်များအား ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းများကို စွမ်းဆောင်နိုင်မည်ဆိုပါက ဒေါ်လာ (၁) သိန်းနဲ့အထက်ပမာဏပင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။
ကံကြမ္မာနဲ့ ပတ်သက်သည့် ဆောင်ပုဒ်များရေးသားရသည့် အဆိုပါ အလုပ်သည် လစာအားဖြင့် ဒေါ်လာ (၄) သောင်းမှ (၆) သောင်းအထိ ရရှိနိုင်ပေမယ့် နှစ်သက်ဖွယ်ရာကောင်းသည့် အလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းလည်း ဆိုကြပါတယ်။
Previous Cursed Child Painting ဟုအမညျရသညျ့ Dorian Grey ပနျးခြီကားရဲ့ နောကျကှယျမှ ဖွဈရပျဆနျးမြား။
Next မိနျးမအင်ျဂါအကွီးစားနဲ့ သှားတူနသေညျ့ ကာတာနိုငျငံမှ ကမ်ဘာ့ဖလား ဘောလုံးကှငျး။